काठमाडौं, १५ असोज । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९११ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
चितवन, १५ असोज । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विसं २०७७ को विजयादशमीलगायत दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०७७ कात्तिक १ गते शनिबारदेखि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ शुरु हुँदैछ । दुर्गा पक्षसमेत भनिने दशैँको पहिलो दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घरघरमा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी विशेष पूजासहित घटस्थापना गर्छन् ।
वडास्तरमा छनौट भएका योजनाका लागि ८ करोड ५७ लाख बिनियोजन
भुम्लिचोक, १५ असोज । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकाको बुधबार सम्पन्न छैटौं गाउँसभाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।यस अघि गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विषयमा विवाद हुदाँ अहिलेसम्म प्रशासनिक भवन
धादिङ, १५ असोज । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ५ स्थित बिशालटारका रहेको चन्द्रोदय बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत कुशल रिजाल जिल्ला प्रथम हुनुभएको छ।
सुमुधुर स्वरकी धनी इच्छाकामनाकी चेली रुपा गुरुङको स्वरमा पहिलो गीत ‘मेरो माया कहाँ छ...’ असोज १६ मा सार्वजनिक हुने
गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको गीत ‘मायामा हामी...’ सार्वजनिक
काठमाडौं, १५ असोज । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९११ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले देशभरमा थप १ हजार ९११ जना कोरोना संक्रमित थपिएको बताए। योसगै सक्रिय संक्रमितम २१ हजार ८३० पुगेको छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार आज थप ९६१ जना संक्रमित निको भएका छन्।
आफ्नो दृष्टि खिचेर त्यो समयमा को हुन्छ हेरीदिने । आफ्नै हात समाई त्यो समयमा को हुन्छ लेखी दिने ।। राम्रो चित्र उतारि
नारायणी नदी छेउछाउमा फोहर फाल्ने कार्य अबिलम्ब रोकियोस
छोपिएको प्रतिविम्व !
कोरोना भाइरस को कहर सँगै फेरिएको जीवनशैली, चुनौती र सिकाई
भारतमा एक नेपालीले १० हजारमा अर्काको श्रीमती किनेर श्रीमान् कै अघि बलात्कार गरी फरार
प्रहरीलाई कुटपिट गरी घाईते बनाएको आरोपमा दिल्लीमा २ नेपाली पक्राउ
सातै प्रदेशमा ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्न इजरायलसँग सम्झौता
विद्यार्थी संख्या अनुसार आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले निर्देशन दियो
एरोबिक्स : छरितो र फुर्तिलो शरीरका लागि
आईपीएल क्रिकेटमा कोलकत्ताको पहिलो जित, आज राजस्थान र पञ्जाबबीच खेल हुने
बन्दी बुबालाई पत्र